Ngokubanzi Awe.sm Uhlalutyo lweMithombo yeendaba kuLuntu | Martech Zone
Ngokubanzi Awe.sm Uhlalutyo lweMidiya yoLuntu
NgoLwesibini, Juni 19, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Xa kufikwa kwintengiso yemidiya yoluntu, kubahlalutyi ngumtshintshi womdlalo. Ngaphandle kubahlalutyi iba yinto engenakwenzeka ukumisela ukuba leliphi iphulo eliphumeleleyo, apho iya ngqo khona ingeniso yentengiso, kwaye yintoni edibanisa nabathengi. Nangona kunjalo kubahlalutyi ngenxa yokuba kubahlalutyi ayincedi nganto. Kuphela ezo zichaza ukuba ungenelelo losasazo lwendaba kwezentlalo longeza njani ixabiso okanye zikhokelela kwimicimbi yokuguqulwa.
Ndiyayo.sm wenza intengiso yentsebenzo kwimidiya yoluntu. Ikonyusa imidiya yoluntu kubahlalutyi kunye "nokuqonda okusebenzayo," ukuvumela amashishini kunye nabathengisi ukuba bafumane impendulo ecacileyo kunye nokulinganisa kwimibuzo enje ngokuba ngaba iphulo losasazo loluntu lenze ukucofa kwiwebhusayithi, zingaphi ezo zinto zicofwayo ziguquliweyo, ixabiso lolo tshintsho, nokunye okuninzi.
I-awe.sm liqonga eliphambili leenkampani zokusebenzisa idatha yoluntu. Silinganisela indlela ukuthengisa kwezentlalo njengezithuba ze-Facebook kunye nohlaziyo lwe-Twitter kukhokelela kwiziphumo ezinentsingiselo, njengokusayina, ukuthenga, kunye nezinye iinjongo zeshishini
Nalu udliwanondlebe oluboniswa nguScobleizer Ndiyayo.sm kunye ne-VIPLi.st, isicelo esisebenzayo esibonisa ubuchule beAwe.sm:
I-Awe.sm ibonelela ngesixhobo sokupapasha, okanye ungasidibanisa nokuhamba komsebenzi okukhoyo. Ilandela iposti nganye yemidiya yoluntu kwaye ibonelele ngolwazi oluneenkcukacha ezinje ngejelo, ixesha losuku, umyalezo, umxholo kunye nokunye. Idityaniswa noHlaziyo lukaGoogle kunye nokubonelela ngembuyekezo kutyalo-mali lwamajelo asekuhlaleni ngokuthelekiswa nezinye iindlela zokuthengisa.
I-Awe.sm yenqanaba lesithuba somntu ngamnye livumela uthelekiso olulula lokufumana indibaniselwano ecofa. Umzekelo, abantu banokubhalisela umcimbi othunyelweyo. I-Awe.sm iqhuba phantsi kwaye ifumanise ukuba yeyiphi i-tweet okanye i-tweet kwakhona, okanye i-Facebook okanye isabelo sabantu ababhalisile, bevela kuyo. Kwaye, iingxelo zihamba ngaphaya kokurekhoda ukuthanda okanye izabelo, kwaye zibonelela ngamanyathelo okanye ixabiso ngokwemali.
I-Awe.sm inikezela ngezicwangciso ezintathu ezahlukeneyo: isicwangciso somntu seprojekthi enye, isicwangciso sepro esivumela ukulawula iiprojekthi ezilishumi ngaxeshanye kunye nesicwangciso seshishini esivumela ukulawula inani elingenamda leeprojekthi ngaxeshanye. Isicwangciso seshishini sinikezela ngenkqubo yokulandela umkhondo kwimithombo yeendaba ekuhlaleni kubandakanya iinkonzo ezinokongezwa kwexabiso ezinjengee-URL zesiko, iingxelo ezimiselweyo ngokwesiko, ukubanakho ukudibanisa idatha ye-awe.sm kwiingxelo zangaphakathi endlwini nokunye.
tags: uhlalutyo apiApiuyoyika.smirobob scobleuhlalutyo kwimidiya yoluntuimidiya yokuncokola apiinyoka.st
Jun 20, 2012 ngo-5:35 AM
Uhlalutyo lwentengiso yemidiya yoluntu yindlela entle yokubonisa indlela amajelo oluntu adlala ngayo indima ebalulekileyo ekulandeleni indawo yakho…